Samsung ayaa mar kale muujineysa sida ay ula dhacsan tahay Apple ee ku dhawaaqidan | Wararka IPhone
Xiriirka u dhexeeya Apple iyo Samsung qaybteeda mobilada waligiis saaxiib ma noqon. Labada shirkadoodba waxay ku dadaalayaan inay noqdaan hogaamiyeyaal wata taleefannadooda casriga ah ee ugu hanka badan taasna waxay si lama filaan ah u horseeddaa iska hor imaadyo mararka qaarkood dhaca. Si kastaba ha noqotee, shirkadda Kuuriya - gaar ahaan, waaxda suuqgeynta - qof ma dareemayo qadarin gaar ah kuwa shirkadda tufaaxa, oo leh ololeyaal joogto ah oo quursigan gaarka ahi ka muuqdo.
Kadib markaan arkay sanadahan ololaha sida taas oo dhammaan dadka isticmaala iPhone loogu yeeray "huggers" inaad yeelato inaad adigu iska dallacdo aaladdaada marwalba marwalba, tixraacyada iyo tixraacyada labadaba ogeysiisyada iyo shirarka, bandhigyada iyo dhacdooyinka waxaa joogto ah Samsung. Haddana waxay ku noqdeen dacwadda.
Ogeysiiska cusub ee ay daabacday shirkadda ayaa muujinaya sahlanaanta ah lacag ku samee iyadoo la adeegsanayo barta Samsung ee macaamillada wireless: Samsung Pay. Astaamaheeda waxay ka dhigan tahay inaan ku bixin karno qalabkooda tiro wanaagsan oo xarumo ah, barta ugu weyn ee Apple lagu dhaleeceeyay tan iyo markii la bilaabay Apple Pay, nidaam aan si buuxda loo fulin loona adeegsan habka ay ahayd. soo jiito oo hayso isticmaaleha.
Si kastaba xaalku ha ahaadee, Samsung waa inay fulisaa "feker maskaxeed" oo aad u xeel dheer oo sifiican loo sharaxay, si mowduuca ku soo noqnoqda qoraaladooda uusan had iyo jeer u tixraacin shirkadda tufaaxa, ama in ka badan mid ka mid ah ayaa bilaabi doona inay ka fikiraan inay leeyihiin Feejignaan la yaab leh oo ay ku xaqiijinayaan ka sarraysiin - xilligan la joogo - cidina ma siinin. Waqtigaan la joogo, waxay umuuqataa in la joogi doono waqtigii la sii wadi lahaa aragtida nuucaan oo kale ah waqti ka waqti.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Pay » Kani waa xayeysiiska cusub ee Samsung ee tixraacaya Apple markale
XD Waan jeclahay ganacsigan, afka oo dhan ilaa Apple.
Ma garanayo waxa ay Apple ka rajeyneyso soo saarista adduunka oo dhan. Waayahay waxay tijaabinayaan nidaamka, laakiin tartanku waa cunista dhulka. Marka Apple Pay ay tahay habka ugu badan ee loo isticmaalo moobiilka (waa hubaal inuu ahaan doono), gadaal xayeysiintan ayaa ka soo muuqan doonta nuxurka u dhigma.
Marwooyin Apple, waxaad leedahay tiknoolajiyad ka badan inta la xaqiijiyay. Maxaad sugeysaa
Hahaha, aad ayey ugafiican tahay Samsung.
Way cadahay in Kuuriyaanka ay sameeyaan taleefanno casri ah oo wanaagsan, laakiin waxay umuuqdaan kuwa aan hal-abuur lahayn. Apple waxay soo saartaa wax cusub oo Samsung ayaa nuqul ka sameysata waqtiga rikoodhka ka dibna waxay adeegsadaan istiraatiijiyaddan ganacsi si dadka looga dhaadhiciyo inay badeecadoodu ka wanaagsan tahay tan Apple. Iyo natiijooyinka degdega ah ee naqshadeynta ama cilladaha amniga ee ku dhammaaday ka tagista isticmaalaha aan la ilaalin. Iyo haddii aan ku darno ugu badnaan waxay bixiyaan 2 sano oo cusbooneysiin ah boosteejooyin qiimo sare ...
Waxaan u maleynayaa in Samsung ay tahay inay diirada saarto alaabteeda oo aysan kaliya isku dayin inay hagaajiso waxa dadka kale sameeyaan. Waa inaan horumariyo fikradahayga gaarka ah sida shaashadda qalooca, taas oo inkasta oo aanan shakhsiyan jeclayn, waxaan u arkaa inay tahay ikhtiraac iyo muuqaal dad badani soo jiidan karaan. Hadana haddii ay kordhiyeen taageerada heerka cusboonaysiinta muddo dheer, waxaa laga yaabaa inaysan ku qasmin tartanka.
Tartanku lama socdo Samsung. Waxaa jira shirkado kale oo ku urursan suuqyada qaranka markii ay go'aansadaan inay si dhab ah isugu soo bandhigaan suuqa adduunka ay Apple iyo kuwa kaleba neefsan doonaan. Qalabka lagu iibiyo kaliya Shiinaha, tusaale ahaan.
Waxaan isticmaalayay Apple muddo ka badan 20 sano. Laakiin waxaan eegay qaar ka mid ah alaabada Samsung oo lacag aad u yar bixisa waxay la mid tahay Apple. Intaas waxaa sii dheer, waxaan haystaa Ipad aan qirayo inay duug tahay, laakiin waqtigaas waxay igu kalliftay $ 600 oo hadda, siyaasad ahaan inaan ku dhawaaqo inay ka baxday taageerada farsamo ee Apple, waa wax aan faa'iido lahayn. Ipad-ka cusub halka aan ku noolahay waxay ku kacaysaa $ 1000. Noocyada kale waxay bixiyaan isla wax ka yar kala bar. Waxaan bilaabay isticmaalka Apple markii ay yaraayeen, laakiin markasta oo aan helo doodo yar si aan u sii wado iibsashada alaabtooda.
“Waxaan eegay qaar ka mid ah alaabada Samsung oo lacag aad u yar bixisa oo la mid ah ta Apple” hahahaha maxaa kaftan fiican hahaha aan aragno wax badan ...
Facebook wuxuu ku darayaa 3D Touch shaqadiisa barnaamijkeeda loogu talagalay iOS